HomeỤWAAsia86 ChinaMaglev China na-azụ ka ịbute 1000 Km kwa elekere iji bido na 2020
07 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 86 China, Asia, ỤWA, ụgbọ okporo ígwè, General, Oru ngwa ngwa, Isi akụkọ 0
A ga-arụ ọrụ ụgbọ oloko na-erute ọsọ nke km
Taa, ebe ụgbọ oloko dị elu gbasaa ebe niile, China na-arụ ọrụ n’akwụsịghị akwụsị maka ụgbọ oloko maglev bụ ndị webatara usoro ha na ọnwa ndị na-adịbeghị anya. Na ọnọdụ a, a ga-eme ọnwụnwa mbụ na mbido 2020.
China abụrụla mba nwere ọnọdụ ọsọ na-emetụta n'okike nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè. N'oge a, mba ahụ abụrụla ụfọdụ n'ime ụgbọ oloko kachasị ọsọ ọsọ n'ụwa ma na-akwado iburu ụgbọ oloko ruo n'ogo nke ihe nkiri akụkọ sayensị site na iji ikike ndọta ya.
Akụkọ na-adịbeghị anya na-ekwu na a ga-etinye okporo ụzọ maglev na etiti mpaghara China, bụ ndị na-eme nkwadebe n'afọ ndị na-adịbeghị anya, site na mmalite nke afọ na-esote. Dabere na akụkọ ahụ, ndị isi ugbu a na-eduzi ọmụmụ ga-ekwe omume ịmalite ọrụ a.
Ọ bụrụ na ihe niile na-aga dị ka atụmatụ si dị, njem site na Guangzhou, China gaa Beijing nwere ike ịme ọsọ ọsọ n'etiti 600 km na 1.000 km kwa elekere, nke pụtara na ụgbọ oloko dị elu nke dị ga-adị oke karịa 350 km / h. Ọzọkwa, akwụkwọ akụkọ Asia Times kwuru, na mgbakwunye, na njem 2.200-km si Wuhan gaa Guangzhou nwere ike belata ihe dịka awa abụọ.
Legbọ mmiri Maglev, na-enweta ike niile site na ndọta ikuku, na-ebelata esemokwu ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnụ ma rute ọsọ nke na-agaghị ekwe omume. Oke ọsọ ụgbọ oloko maglev na-arụ ọrụ ugbu a na China bụ kilomita 90cm kwa elekere. Agbanyeghị, na teknụzụ ndị emegharịrị ọhụrụ, a na-atụ anya na ọsọ ọsọ ndị a ga-eru 430 ruo 600 kilomita kwa elekere.
N'iburu n'uche mpaghara elu China, enwere ike ikwu na obodo ndị ahụ dị anya. Ya mere, ndị ụgbọ oloko na-eji teknụzụ a arụ ọrụ na-eme ka ịdị anya dị n’etiti obodo na-enweghị isi na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na-ewetara ha ọkwa nke nwere ike ịsọ mpi na ụgbọ elu.
China abụghị naanị mba ụwa nwere mmasị na ụgbọ oloko maglev, mana amaara Japan ama na ọ na-arụ ọrụ na ụgbọ oloko maglev ha. Agbanyeghị, nkwupụta ndị a na-ekwu na nso nso a na-egosi na Germany na United States na-arụkwa ọrụ na nsụgharị ụgbọ mmiri maglev nke ha. (Webtekno)
Ndabere 1000 na elekere elekere nke China kwa awa Maglev 30 / 11 / 2012 Ndabere 1000 na elekere elekere nke China kwa awa Maconomv's economy na-ewere ụgbọ okporo ígwè ngwa ngwa dị nnọọ njọ na ọ bụla na-eto eto China. Ruo 2020 lekwasịrị anya na mba ahụ iji mee ka netwọk dị elu ma na-agbago ruo kilomita 1000 n'ụwa, karịsịa otu n'ime teknụzụ ndị ọzọ na agbata na ọkụ eletrik gburugburu ebe obibi. Kwa afọ ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emepụta ma na-ere ahịa eletriki ma ọ bụ ụdị ndị nwere ike. Otú ọ dị, e nwere nsogbu ndị ọkụ eletrik na-agaghị edozi n'ime ụlọ ọrụ ụgbọala. Dịka ọmụmaatụ, njedebe okporo ụzọ na ọsọ. Ya mere, mba ndị ka na-emepe emepe na-agbanye n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè ndị na-abụghị ndị na-azụ okporo ụzọ nke nwere ike iji ọsọ na-ekpuchi anya ebe dị anya Dolayısıyla
China na-ewepụta Prototype nke Maglev okporo ụzọ ka ọsọ 600 mileage kwa Awa 23 / 05 / 2019 China weputara ihe omuma nke ugbua ugbo, nke ga aga njem na 600 kilomita kwa awa. A na-eji Maglev maka ụgbọ oloko na-agagharị na-enweghị ịkpọtụrụ okporo ígwè ndị ahụ site na iji ike mgbapụta. China Central Television (CCTV), obodo Shandong nke obodo Qingdao nke Xinx ga-aga njem ọsọ ọsọ nke ngwongwo ụgbọ okporo ígwè ahụ na elele anya. Ụlọ ọrụ China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) bụ ụlọ ọrụ China. Maazị Ding Sansan, onye isi ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ, kwuru na ya nwere ike ịnwale nkà na ụzụ ndị dị na prototype na ihe ndị dị mkpa dị na nkà na ụzụ nke usoro ụgbọ okporo ígwè dị elu. 'NKỌKWỤKWỌ ỤBỤRỤ' Nkà na ụzụ maka ọrụ nhazi nke prototype STAT
1000 Km kwa awa iji mee ka ụgbọ oloko na-aga ngwa ngwa 19 / 06 / 2012 Ọganihu China na uzo nke njem na-aga n'iru n'ogo. Ihe mgbaru ọsọ ọhụrụ nke ndị injinia China bụ ịkwọ ụgbọ okporo ígwè nke nwere ike ịga na ọsọ nke 1000 kwa awa. China, mba kachasị mma n'ụwa, na-etinye ego n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè iji merie nsogbu ụgbọ njem. Mkpa nke ụgbọ okporo ígwè na-arịwanye elu dị ka ọnụ ọgụgụ nke mmanụ ụgbọala na-ebelata ma ahịa na-abawanye. Ụlọ ọrụ nkwonkwo nke Ụlọ Akwụkwọ Academy of Sciences na Chinese Academy of Engineering pụtara na ụzọ ụgbọ okporo ígwè nwere ike ịgbanwe kpamkpam site na mba ahụ. Dị ka akụkọ ahụ bipụtara na Beijing Times, ndị injinia China na-arụ ọrụ n'ụgbọ okporo ígwè nke pụrụ ịga 1000 kilomita kwa awa. Kedu otu o si arụ ọrụ? Train ...
A ga-amalite ụgbọ okporo ígwè Samray na December 17 / 10 / 2013 A ga-etinye ụgbọ okporo ígwè Samray ọhụrụ na December: 2010 bụ usoro ụzọ ụgbọ okporo ígwè mbụ na Samsun. eme ememe ya. Usoro 3 na-ebute 3 nde ndị njem kwa afọ. Ugo oru ngo a bu ihe ruru 47 nde euro, nke 110 tram na 16 bu nke ejiri n'aka Samsun Transportation Inc. (SAMULAŞ). N'ihi ya, a na-ekesa ihe ndị a na-eme maka ụmụ amaala. Na nkesa nke ndi mmadu, ndi na-abia njem nke 28 na-abata n'ọdụ a nyere ndi okachachite akwukwo ukwu nke Samsun Metropolitan Municipality, Sefer Arlı. NDỤMỌDỤ NTỤKWU NDỊ ỌKỤKWỌ NDỊ ỌZỌ 3 47 nde afọ kwa afọ
A ga-eme ka Ụlọ Nzukọ Ọhụrụ nke Gaziantep dị ọhụrụ gbanwee na 2020 30 / 12 / 2018 Mehmet Cahit Turhan, Minister of Transport and Infrastructure, ndị bịara Gaziantep maka ọtụtụ nleta na kọntaktị, nyochare ọrụ na-aga n'ihu na mgbasawanye nke Gaziantep Airport Terminals na iwu nke ụlọ ọhụrụ ahụ ma nweta ozi sitere n'aka ndị ọchịchị. Turhan gwara ndị otu akuko ahụ mgbe ha nyochachara, ụlọ ọrụ Gaziantep Airport nke ọhụrụ ga-emeghe n'afọ 2020 kwuru, sị: "Gaziantep bụ ọrụ dị mkpa na njem ụgbọ elu nke ọdụ ụgbọ elu anyị iji gbasaa anyị. 6 na-agụnye usoro ihe ọhụrụ na ndị ọzọ nwatakịrị.
Ndabere 1000 na elekere elekere nke China kwa awa Maglev
China na-ewepụta Prototype nke Maglev okporo ụzọ ka ọsọ 600 mileage kwa Awa
1000 Km kwa awa iji mee ka ụgbọ oloko na-aga ngwa ngwa
A ga-amalite ụgbọ okporo ígwè Samray na December
A ga-eme ka Ụlọ Nzukọ Ọhụrụ nke Gaziantep dị ọhụrụ gbanwee na 2020
A ghaghị imeghe okporo ígwè okporo ígwè Ankara na 2020
A ga-arụ ọrụ Kayseri High Speed ​​Line na 2020
Ndị Nne Na - ahụ Maka Ụmụaka Na - ejide Onwe Ha Mgbe Ha Na - eji Trams Na - abanye 70 ụda